Madaxweynaha Soomaaliya oo saakay dib ugu soo laabtay Dalka – Gedo Times
Madaxweynaha Soomaaliya oo saakay dib ugu soo laabtay Dalka
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi farmaajo iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa saaka dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu shir uga qeybgalay magaalada Sharmal Sheekh ee dalka Masar.
Waxaa ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Soomaaliya,waxaana safarka madaxweynaha Soomaaliya ku wehliyay xubno katirsan Golayaasha Baarlamaanka iyo Wasiirada.
Maxamed Cabdullaahi farmaajo oo ka qeyb-galay Madasha Ganacsiga Afrika 2017 ee magaalada Sharma Sheekh ayaa sheegay in baahi weyn loo qabo mideynta dadaallada iyo qorsheyaasha wadamada Afrika ee ku aaddan maal-gashiga iyo kor u qaadista iskaashiga ganacsiga.
Sidoo kale, Madaxweyne Farmaajo oo maalmo ka hor hadal ka jeediyay shirka ayaa waxa uu madasha ku soo bandhigay khayraadka ay hodonka ku tahay Soomaaliya, fursadaha maal gashi iyo kaalinta ay ka qaadan karto suuqa ganacsiga xorta ah ee Afrika ay qorshaynayso in dhidibada loo taago.
Dowlada uu hogaamiyo Madaxweyne Farmaajo ayaa wado dadaalo lagu hormarinayo Soomaaliya
Wasiirada arimaha Dibada ee Jaamacada Carabta oo Sheegay in Trum uu la saftay Israa’iil
Daawo:Qaar kamid ah shaqaalaha Jubaland TV oo lagu abaalmariyay howlkarnimo dheeraad ah